Kayakairan Daily | कायाकैरन दैनिक || जीवनका रङहरू (यात्रा साहित्य) – kayakairan.com
जीवनका रङहरू (यात्रा साहित्य)
“कमलजी तपाईं ढुक्क भए हुन्छ, मेरो कामै त्यही हो । हजुरले भनेजस्तै व्यवस्था हुनेछ । पटक्कै चिन्ता नलिनू ।”—मित्र जीवन घिमिरेका यी कुराले म साच्चिकै ढुक्क भएको थिएँ । क्याम्पस पढ्दादेखिकै मेरा अभिन्न मित्र भएकाले पनि उनीसँग म ढुक्क भएको हुँ । स्थान पनि तयार भयो । उपस्थित हुने १३ जनाको ‘लिस्ट’ पनि ‘फिक्स’ भयो । मलाई कार्यक्रमको अध्यक्ष भनिएको थियो मात्र । मैले खासै गम्भीर कुरा ठानिरहेको थिइन ।
धेरै दिनदेखि जमर्को गरिरहेका थियौं विशुद्ध दाजु भाइहरूको जमघट गर्ने कार्यक्रमको योजनाको विषयमा । जमघट त गर्ने । तर, कसरी र कहाँ गर्ने विषयमा निकै चर्चा र परिचर्चा चल्यो । बन्दिपुर, घले गाउँ, मलेखु, आसपास । यस्तै धेरै ठाउँहरूमध्ये कहाँ बस्ने भन्ने कुराहरू चले । हाम्रो उद्देश्य प्रकृति नियाल्न लालायित कविहरूको उद्देश्यजस्तो थिएन । मात्रै भातृमिलन । हामी धादिङ, चितवन र काठमाडौँबाट जम्मा हुनुपर्ने भएर पनि सकेसम्म सबैलाई सजिलो हुने स्थानको खोजी भइरहेको थियो । भाइ केशव र डी.एन. अलि बढी नै उत्साहित थिए । कार्यक्रमको विषयमा सबै दाजु भाइहरूसँग उनीहरू नै सम्पर्कमा थिए ।
मैले १४ गते बेलुका डी.एन. र केशवलाई कार्यक्रमको विषयमा सोधेँ । उनीहरूले केही तयारी छैन कहाँ जाने र को–को जाने हो भन्ने कुराको निक्र्यौल नभएको बताए । मैले अलि कडा स्वरमा भनें, “के केटाकेटी खेलेजस्तो कुरा हो तिमीहरूको ? १२÷१५ जना भेला हुनुहुन्ुछ । हाम्रो आयोजनामा हुने कार्यक्रममा कमीकमजोरी हुनुहुन्न ।”
उनीहरू आत्तिएजस्ता देखिए र भने, “यो कार्यक्रमको अध्यक्षता हजुरले गर्नुप¥यो ।” मलाई जसरी पनि कार्यक्रम सफल बनाउनु थियो । यो पल्टको उनीहरूको प्रस्ताव अलि गह्रुँगो लाग्यो । मैले अध्यक्षता स्वीकार गरेँ । उनीहरूले सबैलाई फोनमार्फत तुरुन्तै जानकारी पनि गराएँ, “हाम्रो यो कार्यक्रमको विषयमा कमल दाजुलाई सोध्नू, उहाँ नै कार्यक्रमको अध्यक्ष हो ।”
मलाई धमाधम फोन आउन थाल्यो । मसँग कहाँ जाने भन्ने प्रश्नको उत्तर थिएन । तर, पनि भनेँ, “अब एक घण्टामा सबैलाई जानकारी हुन्छ ठाउँका विषयमा ।” सबैलाई पायक पर्ने स्थान मलेखु र यसैको आसपास थियो । विशेषगरी काठमाडौँ र चितवनलाई आधार बनाउँदा ।
छिटो निर्णय गर्नुपर्ने एकातिर थियो भने अर्कोतिर साथीहरूलाई नरमाइलो होला भन्नेमा म चिन्तित थिएँ । सबैभन्दा पहिला को–को जाने विषयमा व्यापक सल्लाह हुन जरुरी थियो । काठमाडौँ, धादिङ र चितवनका सबै दाजुभाइहरूसँग परामर्श गरेर १३ जनाको सूची तयार भयो ।
साथीहरू छान्न निकै चुनौती थियो । हामीसँग मन मिल्ने दाजुभाइ २५ जनाभन्दा बढी थिए । विभिन्न कुराहरूलाई मध्यनजर गरेर १३ जना छनौटमा पारिएको थियो । अब ठाउँको विषयमा निकै छिटो ‘डिसिजन’ गर्नु थियो । चरौँदीदेखि गजुरीसम्म भए सबैलाई मान्य हुने भएपनि गजुरी र मलेखुमा खासै उपयुक्त ठाउँ पत्ता नलागेपछि चरौँदी नै गन्तव्य स्थान हुनेमा म पक्का थिएँ । पुरानो साथी जीवन घिमिरेलाई सबै कुराको जानकारी गराएँ । उहाँ निकै खुसी हुनुभयो र भन्नुभयो, कमलजी, कुनै चिन्ता लिनु पर्दैन सबै कुराको व्यवस्था म गर्छु । तपाईं ढुक्क भएर आउनू ।” उहाँको यस्तो जवाफले म ढुक्क भएँ ।
सबैभन्दा पहिला काठमाडौँ फोन गरेँ र जानकारी गराएँ । स्थानको विषयमा भाइहरू कमलप्रसाद अर्याल, हरि अर्याल, गिरिराज अर्याल, हरि तिवारी र भाञ्जा दिनेश भट्ट सबैलाई पालैपालो फोन गरेर सबैलाई काठमाडौँको दाजुभाइलाई फोन गर्न अनुरोध गरेँ । धादिङमा दाजु गोविन्द नेपाल, भाइ राम नेपाल, सरोज नेपाल र भतिज जयराम अर्याललाई उस्तैगरी सबैसँग सम्पर्क गरेर आउनू भनेँ । चितवनमा भाइ डी.एन. अर्याल, केशव अर्याल र हरि नेपाल त सबै सम्पर्कमा नै थियौँ ।
हामीले तोकेको समय २०७५।१२।१५ गते दिनको ४ बजे थियो । ४ बजे चरौँदी बजार पुग्नुपर्ने सबैलाई जानकारी भइसकेको थियो । १३ जना जाने कुरा भए पनि हामीले छानेका एकजना सदस्य आउन पाएनन् र १२ जना जना निधो भयो । चितवनबाट हामी चारजना यात्रामा निस्कियौँ । निस्कनुअघि भाइ केशवले तस्विर फेसबुकमा राख्यो । मुग्लिङको बाटो हुँदै ३ः४५ मा हामी चरौँदी पुग्यौँ । चरौँदी पुगेर सबैभन्दा पहिला साथीलाई फोन गरेँ । उहाँ हामी भएकै ठाउँमा आउनुभयो ।
साथीहरूलाई सम्पर्क गर्नुभन्दा पहिला हामी मूल स्थानतर्फ गयौँ । चरौँदीबाट कृष्णभीरभन्दा अझै पश्चिमतर्फको ओरालो सकिएपछिको दाहिने पट्टि त्रिशूली रिभर बीच क्याम्प हाम्रो यात्राको केन्द्रविन्दु रहेछ । मूलसडकबाट थोरै कच्ची बाटोपछि पुगिने त्यो निकै रमणीय स्थान रहेछ । भाइहरू पनि खुसी भए ।
अत्यन्तै नरम स्वभावका मृदृभाषी, सबैसँग खुल्न सक्ने थिए मेरा मित्र । धेरैपछि भेट भएको थियो हाम्रो । केही औपचारिक कुराकानी भयो । सबै दाजुभाइहरूसँग सम्पर्क भयो स्थानको विषयमा । सबैजना बाइकमा आएकाले भनेको ठाउँमा भनेकै समयमा जम्मा भइयो ।
मेरा आदरणीय दाजु गोविन्द नेपाल मभन्दा एक वर्ष जेठा हुनुहुन्छ । अरु सबै मभन्दा कान्छा थिए । सबै रसिला हँसिला ! केहीबेरको भलाकुसारीपछि चिया पिउने कुरा उठ्यो । तर, चियाभन्दा पनि भोक लागेकाले खाजा ‘अर्डर’ भयो । सबै निकै खुसी थिए । वरिपरि बगैँचामा ढकमक्क फूल फुलेका । हरियो दुबो, धुपीलगायत विभिन्न खाले मनै चंगा बनाउने वातावरण स–साना होचा कटेजहरू पार गरेपछि देखिने अत्यन्तै सुन्दर त्रिशूली नदीको काखमा रहेको स्थान देखेर हामी प्रफुल्ल भयौँ । छेउमा विदेशीहरू मस्तले झुमिरहेका थिए । त्रिशूलीको मन्द आवाज र किनारमा मिलाएर राखिएकै जस्तो देखिने लोभै लाग्ने ठुल्ठूला चिल्ला ढुंगा, बालुवाका निकै फराकिला मैदान र स–साना सेता, काला, खैरा चिल्ला ढुंगाहरुको संगम । अनि त्यसैमा स–साना कपडाका घरहरू निकै सुन्दर निकै उत्कृष्ट र रोमाञ्चक मोडमा तस्विर लिंदालिंदै चिसोको एउटा कार्टुन आयो । हामीले सबैजना रिङ्गै बसेर खाजा खाने निधो ग¥यौँ । त्यसैबमोजिम तयार गरियो । खाजासँगै चिसोको चुस्की लगाउँदै एक अर्कालाई उडाउँदै रमाइलो गर्दै खाजा खायौं ।
खाजा खाइसक्दा साँझ पर्नै लाग्यो । साथी विज्ञ थिए यस्ता जमघटका विषयमा । अब सबै साथीहरू नाच्ने मूडमा देखिए । साथी जीवनकै अग्रसरतामा स्पीकर आयो । चलेको गीतहरू बज्न लाग्यो । “विदेशी पाहुनाहरूलाई अप्ठ्यारो हुन्छ कि ?”, मैले साथीलाई सोधेँ । साथीले भन्नुभयो, “हुन्न अप्ठ्यारो भयो भने कोठामा जान्छन् ।” उनीहरू रमाइलो मानेर हेर्दै थिए ।
कार्यक्रमको रौनक बढ्यो । त्रिशूलीको आवाज मन्द भयो । झिलिमिली बत्ती बल्यो । सबैले घर बिर्से । व्यापार बिजनेस बिर्सिए । ठूलो सानोको दर्जा भुले । सबै समान, सबैलाई मित्र सम्झिए । रमाइलोकै लागि कार्यक्रम चलाइयो । खेल खेलियो । यो खेल खेलिएला भन्ने कल्पनासम्म गरिएको थिएन । गीत बजिरहेको थियो । स्पीकर बन्द गरेर आÇनो मन्तव्य राख्न गोविन्द दाजुलाई बोलाएँ । मन्तव्य औपचारिक हुन खोज्नेबित्तिकै मञ्चबाट तल झार्दिएँ र फेरि गीत बजाएँ । त्यसमा भाइहरूले सघाए । त्यस्तै रितले प्रायः सबैलाई मञ्चमा बोलाउने, भाषण गर्दागर्दै गीत बजाउने र तल झार्ने अत्यन्तै उत्कृष्ट कार्यक्रममा निकै हाँसियो । आखिर जीवन कुनबेला छ, कुनबेला छैन ! कसले जान्दछ र याद भने छोड्नैपर्छ । आफन्तलाई, दाजुभाइलाई काम लागिएन भने अस्तित्व छैन जीवनको । एउटा रङले रंगीन हुँदैन । जीवनको इन्द्रेणीका लागि विभिन्न प्रकारकारे रङ मिसिनुपर्छ । हामी रंगीन थियौँ । सबैको मन मिलेको थियो ।
बगरमा आगो बल्यो । हामी नाचिरह्यौँ, हाँसिरह्यौँ । मेरो साथी अब मेरो मात्रै साथी हुनुभएन सबैको प्रिय हुनुभयो मन मिल्यो । हामीसँग घुल्नुभयो, नाच्नुभयो, पिउनुभयो र खानुभयो । अब पछिका कार्यक्रम हरि तिवारी भाइलाई जिम्मा लगाएँ । ऊ अध्यक्ष भयो सबैको सहमतिमा ।
बगरमा आगो बल्न थालेको केहीबेरमा बजिरहेको स्पीकर बोकेर भाइ डी.एन. आगो छेउमा गयो । सबै स्पीकरको पछि लागे । त्यहाँ आगोको कोइलामाथि शिकारका टुक्राटाक्री च्याप्दा नझर्ने फलामको जाली राखिएको थियो । त्यसमा धमाधम सिकार राखियो । चिसा बोतलहरू थपिए । कसैलाई रोकतोक गरिएन । बन्देज गरिएन । निकैबेर पोलिएका सिकार र चिसा गिलाससँगै भयौँ । जीवन चलाउनकै लागि चलाउने भए निकै धेरै दाजुभाइहरूमा १३ जनाभित्र किन परिन्थ्यो र ! जीवनमा हामीले दिनहुँ बाँचिरहेको जीवनभन्दा फरक पनि जीवन छ भन्ने नजानेकाहरू पर्ने कुरै थिएन । परेकाहरू पनि अर्को कार्यक्रममा नपर्न सक्छ । पर्नका लागि उसको विचार अरुको विचारसँग मिल्नुप¥यो ।
स्पीकरको आवाज बन्द भयो । आगोको कोइला विस्तारै निभ्न थाल्यो । यो कार्यक्रम पनि सकियो । अब केहीबेर रमाइलोकै लागि आफैंले गीत भन्ने, गजल भन्ने, दोहोरी गाउने, नाच्ने रमाउने भइरह्यो ।
खाना तयार भयो । खबर आएको केहीबेरमा डाइनिङ रुममा सबै भेला भइयो । खानापछि सुत्ने कुरामा केही मतभेद निस्कियो । बगरमा बनाइएको कपडाको घर (टेन्ट) मा सुत्ने कि व्यवस्थित कटेजमा भन्ने कुराले हाँगा हाल्नु अगावै बगरमा जाने निधो भयो । बगरमा १० ओटा साना घरहरू थिए । कुनैमा २ जना, कुनैमा १ जना सुत्ने निर्णय भयो । प्रत्येकमा दुईवटा स्लीपिङ ब्याग थियो । तल एउटा म्याट ओछ्याइएको थियो । त्यो पहिलो अनुभव भएकाले निकै रोचक पनि भयो । आफूले चाहेको तकियाँ राखेर आरामले सुतेका हामी सुकुमारहरू केहीबेर तकियाँको खोजी गरिरह्यौँ । त्यो रहर थियो हाम्रै । हामीले रोजेको रोजाइँ थियो । रातभरि त्रिशूली सुसाइ रह्यो ।
त्यहाँ स्याल कराएन, कुकुर कराएन, न गाडीको आवाज नै आयो । न त त्यहाँ बाल्यकालमा सुनेका किचकन्नी र मुर्कट्टाहरुले नै तर्साए । कसैको मोबाइल चलेन । चरम सुखानुभूति गरेर त्रिशूलीको किनारमा जीवनको पहिलो अनुभव बटुल्दै सुतियो ।
बिहान स–साना कुटीबाट विस्तारै–विस्तारै सबै उठे । कथा फरक थियो बिहानको । फोनको खोजी भयो । सबैको आ–आÇनो व्यापार थियो, बिजनेस थियो, जागिर थियो । कोही बेरोजगार थिएन । मित्र जीवन घिमिरेले ¥याÇिटङको कुरा उठाउनुभएको थियो हिजो । यसको अनुभव थिएन मलाई । तर, पानीका छालमा हुत्तिदै बग्दै गरिएका दृश्य भने टेलिभिजनका पर्दामा र बसका झ्यालबाट कयौँपटक देखिएका थिए । मनमा उत्सुकता थियो । तर, आज बिहानैदेखि घाम देखिएन । यो अनुभवबाट वञ्चित हुनुपरेकामा भने मन अलि खिन्न भयो ।
साथीहरू बिहानको नास्ता र खाना अन्तै खाने मूडमा देखिए । हरि तिवारी भाइले सबैको सहमतिमा जयराम अर्याललाई बाँकी कार्यक्रमको अध्यक्षता ग्रहण गर्न अनुरोध गरे ।
हामीले कागती पानी र कालो चिया लियौँ र बिल भुक्तानी ग¥यौँ । जीवन घिमिरेले बिल हेर्नुभयो । सकेको र मिल्ने डिस्काउन्ट गर्न भन्नुभयो । हामीले तिर्नुपर्ने रकम तिरेर बिदा हुने तयारी ग¥यौं । होटल मालिक श्याम गिरीसँग कार्ड माग्यौँ । कार्डमा एकातर्फ जीवन घिमिरे र अर्कोतर्फ श्याम गिरी लेखिएको रहेछ । त्यो होटलको सेरोफेरो सबै मित्र जीवन घिमिरेको पो रहेछ । हिड्नेबेलामा बल्ला थाहा भयो ।
बिहानको कार्यक्रमको अध्यक्ष बनेका भतिज जयराम अर्यालको बाइक अगाडि लाग्यो । हामी सबै पछि लाग्यौँ । बाइक मुग्लिङतर्फ अगाडि बढ्यो । मोवा खोलामा बाइक रोकियो । त्यतिबेला बिहानको ८ः३० भएको थियो । सबै बाइक र गाडी घलेको ढिंडो पसल (घलेको होटल) मा रोकियो । घलेको पसलको कुरा जीवन घिमिरेले गरेका थिए । जयरामले यसमा चासो राखेका थिए । बिहानको खाना लोकल कुखुराको मासु र ढिंडो खाने योजना बनाएका रहेछन् जयरामले । यो पनि अप्रत्यासित नै भयो ।
खाना १० बजे मात्रै तयार हुने कुरा भयो । हामी चितवन र धादिङको सीमानामा थियौँ । पुलको मुखबाट दक्षिणतर्फ पैदल यात्रा गर्ने सबैको सल्लाहबमोजिम उकालो लाग्यौँ । बेनीघाट रोराङ (धादिङ) र इच्छाकामना (चितवन) लाई छुँदै निकै माथि पुग्यौं । जति माथि गयो उति रमाइलो थियो । घले गाउँको पखेराभरि लोकल काँक्रो फलेको देखेपछि हामी निकै हर्षित भयौँ । नेपालकै प्रख्यात ठाउँ रहेछ लोकल काँक्रोका लागि । काँक्रो किनेर खायौँ । आहा ¤ जवाङ खोलामा पानीको मात्रा कम भए पनि निकै कञ्चन र सफा थियो । जवाङ खोला र अर्को खोला (नाम भने थाहा भएन) मिसिएर तल राजमार्गमा मोवा खोला बग्दोरहेछ । हामीले जवाङ खोलाको कल–कल बगेको पानीमा मज्जाले काँक्रो पखालेर खायौँ । यस्ता पखेराहरू कति खेर गइरहेका छन् । यहाँ सुन फलेको देख्दा मनै प्रफुल्ल भयो । निकै माथिसम्म गएर फर्कियौँ ।
घले दाइको होटेलमा ढिंडो तयार हुँदै रहेछ । हिजो बेलुकाका रमाइला पलहरू स्मरण गराइरहेका थिए भाइ राम नेपालले । उनले भिडियो पनि खिचेका रहेछन् । हेरेर खुब हाँसियो । ‘प्रथम दाजुभाइ भेटघाट कार्यक्रम’ नाम दिएर माइन्युट तयार भयो । जसमा कहाँ र कस्तो खाले कार्यक्रम क–कस्को उपस्थितिमा भएको थियो भन्ने कुराहरू थियो । भावी कार्यक्रमको अध्यक्ष फेरि मलाई नै बनाउने र सचिव जयराम अर्याललाई बनाउने निर्णयमा सबैलाई सही गराए डी.एन. अर्यालले ।
ढिंडो र लोकल कुखुराको मासु, अचार, साग, तरकारी खुब मिठो भयो । धेरै भएछ यस्तो स्वाद नखाएको । कोदो र मकै मिसाएर तयार पारिएको पिठोको ढिंडोको बयान गरेर सकिने खालको थिएन । मौसम पानी पर्ला जस्तो निकै अँधेरो थियो । सबैलाई जान हतार थियो । काठमाडौँ र धादिङबाट आएकाहरूसँग आत्मीयता साटासाट गरेर छुटियौँ ।
यो कार्यक्रम विशुद्ध दाजुभाइ भेटघाट गर्ने र आत्मीयता साटासाट गर्ने अनि आ–आÇनो जीवनका रङहरू एकैछिनका लगि भुलेर तरोताजा हुने मात्र थियो । अब हुने कार्यक्रम नेपालका प्रख्यात पर्यटकीय स्थलमा गर्ने निर्णय पनि गरियो ।
हामी काठमाडौँ, धादिङ र चितवन छुट्टियौँ । भाइ केशवले गाडी चलाएको थियो । हिजो अलि बढी नै ज¥याकम¥याक गरिएछ कि क्या हो गाडीमा भुसुक्कै निदाइएछ । भाइ केशवको ‘ओर्लिनु’ भन्ने आवाजले बिउँझिएँ । गाडी जलविरेको झरनाको उकालानिर रोकिएको थियो । जनही ५०–५० को टिकट काटेर माथि लागियो । झरना मनमोहक थियो । मानिसहरू खासै थिएनन् । तर, त्यो प्रकृतिको मनमोहकता हृदय छुने किसिमको थियो ।
मैले सम्झिएँ, रुसोको भनाइ । उनले भनेका थिए, “प्रकृतितर्फ फर्क ।” हामीले एउटा अस्ट्रेलियनलाई देख्यौँ, जो काठको फलेकमा जिउ तेस्र्याएर झरनाको झर–झरलाई नियालिरहेको थियो । उसको एकाग्रता ३–४ घण्टादेखिकै रहेछ भन्ने कुरा सुन्दा भाइ केशवको अप्रत्यासित गन्तव्य परिवर्तन सुखद नै भएको मनमा सजायौँ । प्रकृतिको त्यो मनोरमतामा रमाउँदै र हिजोका मित्रमिलन कार्यक्रमलाई सम्झिंँदै हामी पुनः आफ्नै बासस्थानतिर हानियौं फेरि–फेरिका जमघटका कल्पनालाई मनमा सजाएर ।